Cali-gurey Oo Duray Aaminaadda Bulshadu Ku Qabi Karto Guddida Kasoo Kasbashada Abaaraha | Baligubadlemedia.com
Cali-gurey Oo Duray Aaminaadda Bulshadu Ku Qabi Karto Guddida Kasoo Kasbashada Abaaraha
Hargeysa(BGM)Siyaasi Cali Maxamed Yuusuf(Cali-gurey), ayaa hoos u dhiay kalsoonida bulshadu ku qabi karto guddida uu dhawaan madaxweyne Siilaanyo u magacaabay kasoo kasbashada abaarihii dalka ka dhacay, waxana uu ka digay hantida lagu baaqayo in guddidaas gacantooda lagu shubo.
Mujaahid Cali-gurey oo war qoraal ah oo uu arrintan kaga hadlayo soo dhigay barta uu Facebook-ga ku leeyahay, ayuu muhmal ku geliyey daacadnimada xubnaha dhawaan la magacaabay oo lacago badan oo bulshada laga ururin doono lagu wareejin doono.
Hadalka Mujaahid Cali-gurey waxa uu u dhignaa sidatan:
“Barnaamijka ka soo kabashada Abaarta ma laga yaabaa inu yahay dhako kale iyo dabagoosigii ugu dambeeyay? Ku lahaa tii horeba si wanaagsan baa loo maamulay Wasiirka Madaxtooyadu isaga xagiisa markaa saw maaha sidii wanaagsanayd ee tii horeba loo maamulay ayaa tanna loo maamuli doonaaye ha ka biqina? Labada goorba u daran. Hadii farta laga saaro 10 milyan oo $ Ilaahay baanay wax ka qarsoomi karaa jirin oo mahadin maayaan., hadii intii hore wax lagu qaatay oo hidh la yidhaana u daran oo wixii la qorshaystay waa ka kac. Qofka daacadda ah ee isagu aamiina ee ku bixiya hor ilaahay isaga way ka geysan tahay sun iyo boogna waxay ku noqon kuwa hunguriyadooda aynu naqaano ee waxay u hunguroodaan aan qof wax isku falayaa u hunguroonin. Hadii la aamini waayo miyaa horta gari Allay taqaane laga gardaran yahay? Miyaa lagu yaqaan oo ma looga bartay amaano Ilaaha Wayne ee waaxidka ah baan idinku dhaariyaye waa la aaminay oo amaanay hayeene? Waxay wax walba kaga dareen indho adayga mudac hadii isha laga geliyo ma libiqsanayaan”sidaas ayuu u dhignaa qoraalka Cali Gurey